Ukuhanjiswa kweMotorola One Vision kunye ne-Exynos 9609 kuvela | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ukucoca zonke iimpawu kunye nemifanekiso ye-Motorola One Vision ngescreen esigqibeleleyo
El Motorola One Vision Isixhobo esilandelayo se-Motorola esinye se-Android, ephethwe nguLenovo. Ifowuni inomdla kakhulu kuba iprosesa iyayinika amandla.
Ngeli xesha, inkampani ayihambelani neQualcomm okanye iMediaTek's Snapdragon SoCsKodwa nge-chipset ye-Exynos ye-Samsung. Kwaye, kwesi sihlandlo, iinkcukacha ezithe kratya kunye nokunikezelwa okutsha kuvelile malunga nomnxeba, nawo oza nescreen esibiweyo.
Kwaxelwa kwasekuqaleni oko iMbono ye-Motorola One yaxhaswa yi-Exynos 9610, kodwa ingxelo entsha evela I-Winfuture utsho oko i-chipset ngenene yi-Exynos 9609. Le SoC kuthiwa yiprosesa engundoqo esibhozo njenge-Exynos 9610, kodwa ngesantya esisezantsi kancinci sewotshi (2.2 GHz xa kuthelekiswa ne-2.310's 9610 GHz). Akukho maxwebhu asemthethweni kwi-SoC, ke ngekhe sikwazi ukubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya.
I-Exynos 9609, esekwe kwinto eqokelelweyo, ibhangqiwe nayo I-4 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina eyandisiweyo Umahluko waseYurophu wefowuni.
Kukho iinkcukacha ezintsha ezinxulumene nekhamera. I-Motorola One Vision iya kuba neekhamera ezimbini zangasemva iqulathe ikhamera ephambili ye-MP eyi-48 ene-f / 1.7 ukuvula kunye nokuzinza komfanekiso ozinzileyo kunye ne-5 MP yesibini sensor.
Ngokomthombo, iselfowuni iya kuba nemowudi yombono ebusuku zinikezelwe ukuthatha imifanekiso engcono kwiindawo zokukhanya eziphantsi. Iya kuba nemowudi yekhamera ekhethekileyo yokurekhoda okufana nemovie kunye nokurekhodwa kwe-4K 30fps kunye nokurekhodwa kwe-1080p 60fps.
I-Motorola One Vision iya kuba nescreen esigqibeleleyo njenge I-Galaxy A8s. Ngaphakathi emngxunyeni wepaneli kukho ikhamera ye-selfie engama-25 MP (f / 2.0).
I-Winfuture qinisekisa ukuba ifowuni inayo Isikrini se-6.3-intshi ye-LCD enesisombululo se-FullHD + se-2,520 x 1,080 pixels kunye nomlinganiso we-21: 9. Lo ngumlinganiso wenxalenye efanayo neefowuni ezintsha. I-Xperia 10 kunye ne-Xperia 10 Plus isuka kwaSony. Nangona kunjalo, awupheli ngefowuni ende ngokungaqhelekanga njengoko iMbono eNye ilinganisa i-160.1 x 71.2 x 8.7 millimeter.
Zonke ezinye iinkcukacha zibandakanya ibhetri ye-3,500mAh eneTurboPower yokutshaja ngokukhawuleza, unxibelelwano lweNFC, iBluetooth 5.0, kunye ne-band-band ye-Wi-Fi.
Ekugqibeleni, Umbono weMotorola One kulindeleke ukuba uqalise Ngomhla we-15 kuMeyi eBrazil kwaye iyafumaneka ukuze ithengwe ngosuku olulandelayo eYurophu. Akukho lizwi kumaxabiso okwangoku, kodwa kuye kwaxelwa ukuba abathengi bokuqala eYurophu baya kufumana isibini ii-Motorola's Verve headphone, ezithengisa nge-130 euros.
(I-Fuente: 1 y 2 | Ngendlela)
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ukucoca zonke iimpawu kunye nemifanekiso ye-Motorola One Vision ngescreen esigqibeleleyo
I-Shark emnyama 2, ukubonakala kokuqala kwesi silwanyana sokudlala
I-Google Pay isebenza kakubi nge-beta entsha ye-Android Q